Kuleeliyaha Dhuxul, kuleeliyaha Warshadaha, isuku soo Dhuxul kuleeliyaha - Taishan Group
Dhuxul kuleeliyaha loo eryay
Kuleeliyaha Oil & Gas loo eryay
Isuku soo Dhuxul kuleeliyaha
Waxaan ku siin QALABKA TAYO SARE
SZS Gas kuleeliyaha loo eryay
SZL dabdhaliyayaasha kuleeliyaha
DHW dabdhaliyayaasha kuleeliyaha
DHW dabdhaliyayaasha Product kuleeliyaha Description DHW kuleeliyaha dabdhaliyayaasha taxane waa hal siman durbaanka dhigin reciprocating kuleeliyaha iyo shabaggeedii, xagal shabaggeedii reciprocating ee reer rabitaan waa 15 °. foornada waa qaab-dhismeedka derbiga xuub, outlet foornada ayaa tuubooyinka slag-qaboojinta, iyo sharikadaha ku outlet foornada gaaska qiiqa waxaa la yareeyo hoos 800 ℃, hoos ka badan hal dhibic barafku of ash Daqsi, si looga hortago in ash dhoobnayd ka slagging on superheater ah. Ka dib markii tuubooyinka slag-qaboojinta ah, waxaa jira-heerkulka sare superheater, low-meel gaarka ...
CFB dabdhaliyayaasha kuleeliyaha
CFB dabdhaliyayaasha Product kuleeliyaha CFB Description (wareegaya buusho Bed) kuleeliyaha dabdhaliyayaasha waa keydinta tamarta, bay'adda u fiican oo hufan. CFB kuleeliyaha dabdhaliyayaasha gubi karaa shidaalka kala duwan dabdhaliyayaasha, sida qori qori, bagasse, caws engegan oo kale, arabikhi oo timir ah, arabikhi oo bariis ah, iwm CFB dabdhaliyayaasha kuleeliyaha qoreysa aagga weyn kulaylinta, sariirta hooseeyo sari heerkulka, technology cadaadis sariirta hooseeyo, martigeliso sari, isa-soociddiisa ku ool ah, SNCR iyo SCR denitration, Wehliyaha hawada xad hooseeyo, technology anti-Duugga lagu kalsoonaan karo, matu ...
SZL Dhuxul kuleeliyaha loo eryay
SZL Dhuxul loo eryay kuleeliyaha Product Description taxane SZL kuleeliyaha dhuxusha leedahay sifooyinka of dusha weyn kulaylka, hufnaan kulayl sare iyo silsilad shabaggeedii nooca squama ah, baxsiga dhuxusha yar, qolkii hawada kala iyo sixitaanka soocay, ololaya ku filan oo joogto ah, qalab outlet ciidda SEPARATOR yaraynaysaa qiiqa godka alaabta gaaska, ay gacanta ku soo noqnoqoshada, PLC & DCS auto-control. SZL dhuxusha taxane rasaas kululeeyaha waxaa si gaar ah loogu talagalay iyo filaayo in ay soo saaraan uumi cadaadis hoose iyo dhexdhexaad ah ama biyo kulul la ev qiimeeyo ...
SHL Dhuxul kuleeliyaha loo eryay
SHL Dhuxul kuleeliyaha kuleeliyaha loo eryay Product Description taxane SHL waa durbaanka double silsilad siman kuleeliyaha bulk shabaggeedii, qayb nooc gadaal preheater hawada. Qalabka gubanaya ansixiyeen shabaggeedii silsilad kala daataa u waafaqayaan mashiinka oo tayo sare leh kaabayaal, lifaaqa iyo qalabka gacanta si toos ah kaamil ah, kaas oo hubinaya in ammaan, dhaqaale xasilloon iyo orodka hufan ee kuleeliyaha. SHL dhuxusha taxane rasaas kululeeyaha waxaa si gaar ah loogu talagalay iyo filaayo in codsiyada in yar yahay wax soo saarka, dhexdhexaad iyo uumi kar ama biyo kulul w ...
Oogeen Dhuxul kuleeliyaha loo eryay
Oogeen Dhuxul kuleeliyaha loo eryay Product kuleeliyaha Description taxane oogeen waa durbaanka hal silsilad siman bulk shabaggeedii kuleeliyaha. Qaybta gubanaya ansixiyeen shabaggeedii silsilad kala daataa u waafaqayaan qalab tayo sare leh kaabayaal iyo nidaam ay gacanta si toos ah kaamil ah, kaas oo hubinaya in ammaan, xasillooni iyo hawlgalka hufan ee kuleeliyaha. Oogeen dhuxusha taxane rasaas kululeeyaha waxaa loogu talagalay lagana filaayo in codsiyada in yar yahay wax soo saarka, dhexdhexaad iyo uumi kar ama biyo kulul oo leh awood uumi lagu qiimeeyo 10 ilaa 65 ton / hr iyo qiimeeyo ...
CFB Dhuxul kuleeliyaha loo eryay
CFB Dhuxul kuleeliyaha loo eryay kuleeliyaha CFB Product Description (wareegaya kuleeliyaha Bed buusho) qoreysa qabsashada wanaagsan dhuxusha, hawlgal ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, waxqabadka sare iyo keydinta tamarta. ash waxaa loo isticmaali karaa sida shaydi ee sibidhka, hoos u wasakhaynta deegaanka iyo kordhinta lacagta dhaqaalaha. CFB kuleeliyaha gubi karaa shidaalka kala duwan, sida dhuxusha jilicsan, dhuxusha anthracite, dhuxusha caatada ah, lignite, gangue, daaalo wado, coke batroolka, dabdhaliyayaasha (chip qoryo, bagasse, caws engegan oo kale, arabikhi oo timir ah, arabikhi oo bariis ah, iwm) kuleeliyaha CFB ...
No. 1169 Beitianmen Street, High-tech Zone, Taian, Shandong, Shiinaha
Weydiimaha kuleyliyaha, fadlan noo soo dir emayl oo waxaan kugula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Reserved Rights. Hot Products , Sitemap , amp Mobile
Isuku soo Dhuxul kuleeliyaha loo eryay, Dhuxul rasaas kuleeliyaha Steam , Dhuxul kuleeliyaha loo eryay, Szl Dhuxul / dabdhaliyayaasha loo eryay kuleeliyaha , Dosh Certified kuleeliyaha , dabdhaliyayaasha Dhuxul loo eryay kuleeliyaha Steam ,